အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ကျွန်တော်နှင့် ဖန်ဆင်းရှင်
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:02 PM
မဲကြီးရေ... ကောင်းလိုက်တာကွာ...Everything You Want Is Not, Everything You Need! ဆိုတဲ့ စကားအတွက် ညီ့အဖေကို ကိုယ်ပါကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ပြောပေးပါ... မဲကြီး အဖေနှင့် တကွ အဖေအားလုံး..ကျန်းမာပါစေဗျာ...
မင်းရဲ့ခေါင်းကို သိပ်မမော့နဲ့ ကောင်းကင်က နိမ့်နိမ့်လေး”
စာသားလေးကိုကြိုက်သြွးပြီ။ အဖေအတွက် ဒီလိုရေးပေးတော့ ကျေးဇူးတင်တယ်။ အဖေ့ကိုလဲသတိရတယ် စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့။
အောင်မြင်မှုမှုတိုင်း၏ အမြင့်မားဆုံး နေရာတစ်ခုတွင် ကျဆုံးမှုသည် ထာဝရရပ်တည်နေကြောင်းလည်း သတိ ပေးခဲ့ဖူးသည်။
အမြင့်ဆုံး ရောက် ပြီး ရင်တော့ ပြန်ကျ ဖို့ ပဲ ရှိတော့ တာ ကိုးးး ... :)
ညီလေး ဖေဖေ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင် ပါစေ ...
အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အကျိုး ဆက်လက် သယ်ပိုး နိုင်ပါစေ ...
အဖေကို စစ်တုရင်ချန်ပီယံနှင့် ဗိသုကာတစ်ယောက်အနေနဲ့ တင်စား ထားတာကို အရမ်းသဘောကျမိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင်ကို အဲဒီလိုမြင်ထားလို့။ တကယ်ပါ လောကမှာရှိတဲ့ အဖေများအားလုံးဟာ ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ ကိုယ်ပွားတွေပါပဲ။ အဖေများအားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေသား။ Your thinking and writing is Fantastic!
မင်းရဲ့ခေါင်းကိုသိပ်မမော့နဲ့ကောင်းကင်က နိမ့်နိမ့်လေး ဆိုတဲ့ စာသားကတော့ အကြိုက်ဆုံးပါဘဲ....။
သတိရပေမယ့် မရေးနိုင်လိုက်ဘူးကွာ။ မင်းလဲ စာမေးပွဲမပီးသေးပေမယ့် ရေးလိုက်တာ ထင်တယ်။ ကောင်းတယ်ကွာ။ စိတ်မှာ အမှတ်တရ သတိရလိုက်မိတယ်။ ငါတို့တော့ ဒီတပတ်နောက်ဆုံး စာမေးပွဲတွေပဲ။ ပီးမှ တွေ့ကြတာပေါ့။
ဒေါက်တာဒေါ်တင်လင်းမြင့် ဆိုတာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်ရဲ့မိန်းမ...သူတို့ဆီမှာ စိုးထက်ကကျွန်၆နှစ်ခံဖူးတဲ့သားတပည့် ပြီးတော့စိုးထက်မိန်းမက ဗိုလ်ချုပ်ကိုကိုရဲ့ တူမ.. ဒီလိုပဲစိုးမြနန္ဒာသက်လွင် ဆိုတာလဲ သူမရဲ့ အဖေရော အမေရော နှစ်ယောက်စလုံးက မြန်မာပြည် TOP 10 ကြီးကြီး MASTER နဲ့ ဆွေမျိုးတော်တဲ့သူတွေပဲ.. စိုးမြနန္ဒာသက်လွင်က မြန်မာပြည်ထောက်လှမ်းရေးကအကြီးဆုံး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်ဆွေရဲ့သမီး တူမဟုလဲပြောနေ သမီးဖြစ်ဖို့သေချာ ဓါတ်ပုံများဖြင့်မကြာခင်သက်သေပြ စိုးမြနန္ဒာသက်လွင်အမေကလဲ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝင် ဗိုလ်မှုးချုပ်အောင်သိန်းလင်း နဲ့ တဝမ်းပဲကွဲတဲ့ ညီမတော်စပ် ဒါတွေကြောင့်အင်္ဂလန်သံအမတ် ဗိုလ်မှုးချုပ်နေဝင်းနဲ့သူ့မိန်းမမှ စိုးမြနန္ဒာသက်လွင်ကို ဖင်မနေရ မြန်မာသံရုံးကဟာတွေ သူမအားထမင်းချက် ကျွန်ခံပေးရ မြန်မာပြည်တွင် စီးပွားရေုးလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာရှိ သောက်သောက်လဲချမ်းသာ လက်ရှိ USA တွင်အခြေချနေထိုင် ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထား၊ ခိုင်မာသော သက်သေများပြနိုင်၊ မကြာမှီ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှဖော်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ၊်
အဲဒီတော့ ဘာလို့ ဒီ၂ယောက်ကို ဝိုင်းဖဲ့ကြတယ် ဆိုတာ စာဖတ်သူတို့ သဘောပေါက်။ ရှင်းတယ်နော် အကျိုးအကြောင်းအချက်အလက်တွေကိုဓါတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများဖြင့် မကြာခင် ဘလော့တခု တည်ဆောက်၍ စိတ်ဝင်စားသည့် ပြည်သူများအား ပြသမည်ဖြစ်ပါကုန်.. မျှော် ဒူဝေဝေဝေ
ပြည်သူနှိပ်စက် သံဃာသတ် ဒင်းတို့ကို တသက်မကျေဘူး ခြေမ မကောင်းခြေမ လက်မ မကောင်းလက်မပဲ ကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်တောင် မကျန်စေရဘူး..
မြန်မာပြည်က နအဖ ကြီးကြီး MASTER များနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ စိုးထက်ရော စိုးမြနန္ဒာသက်လွင်ရော ကိုဒီနေရာကနေ“လုံးဝရှုံ့ချပါတယ်”။
နအဖသားသမီး သမက် စစ်ခွေးတွေနဲ့ စစ်ခွေးအောက်ဆွဲ အလိုမရှိဗျို့
ချစ်သော အဖေ ကျမ်းမာပါစေ။
" HAPPY FATHER'S DAY TO ALL DADDIES "
SO MEANINGFUL & DEDICATED TO ALL DADS.
လောက၏ အမြင့်မြတ်ဆုံးသောလူသားများထဲမှာ အပါအ၀င်ဖြစ်သည့် ဖခင်များ ကျန်းမာပါစေ...ငါလည်း နင့်တိုင်းပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်ဘလက်ရေ...
1.မင်းရဲ့ခေါင်းကို သိပ်မမော့နဲ့ ကောင်းကင်က နိမ့်နိမ့်လေး...
2.Everything You Want Is Not, Everything You Need!”
3.အောင်မြင်မှုမှုတိုင်း၏ အမြင့်မားဆုံး နေရာတစ်ခုတွင် ကျဆုံးမှုသည် ထာဝရရပ်တည်နေကြောင်းလည်း သတိ ပေးခဲ့ဖူးသည်...မှတ်သားစရာလေးတွေပါပဲဘလက်ရေ ...။
ဖခင်ရဲ့ မေတ္တာကို အမျိုးမျိုးခိုင်းနှိုင်းပြထားတာ ကောင်းလိုက်တာဗျာ ဖခင်တိုင်းကတော့ တစ်မျိုးမဟုတ် တစ်မျိုး သားသမီးတွေပေါ်မှာ ဖန်ဆင်းမှုတွေ ပေးခဲ့မှာပါ ပုံစံမတူတာပဲ ကွာမယ် ။
“မင်းရဲ့ခေါင်းကို သိပ်မမော့နဲ့ ကောင်းကင်က နိမ့်နိမ့်လေး” အဲ့ဒီ ဆုံးမစကားလေး ရေလည်ထိတယ် ချစ်သော ဖခင် ကျန်မာရွှင်လန်းပါစေလို့ထပ်တူ ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျာ ။
မြန်မာပြည်က နအဖ ကြီးကြီး MASTER များနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ နေရာတကာလျှောက်လည်ထွက် ဂျိုးတန်းလန်းနဲ့ ကိုဖိုးကွက်ခေါ်စိုးထက် နှင့် လိုးသမျှခံမယ့်ကြက်ဖင် စိုးမြနန္ဒာသက်လွင် တို့အား ဒီနေရာကနေ“လုံးဝရှုံ့ချပါတယ်”။
အစ်ကိုရေ အရေးအသားတွေက အရမ်းကောင်းလွန်းတော့ လေးစားပြီးရင်လေးစားပါတယ်ဗျာ။
ဖတ်လို့ အရမ်းကောင်းတယ်မောင်လေးရေ...ဆက်ကြိုးစား ပါ။အားပေးနေတယ်..(home!)
ကိုမဲကြီးက လက်စွမ်းထက်သားပဲဗျ.. ဆက်ဒူးဆက်ဒူး အားပေးမယ်...
“မင်းရဲ့ခေါင်းကို သိပ်မမော့နဲ့ ကောင်းကင်က နိမ့်နိမ့်လေး” ဆိုတာ သဘောအကျဆုံးပဲ။ မောင်လေးအဖေဆီက အတွေးအခေါ်တွေကို စာဖတ်သူတွေပါ ရသွားအောင် မျှဝေပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ သိပ်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါပဲ မောင်လေးရေ...
Kyel Ka Lay said...
Just dropping by to say...Woww.. you've done the awsome work ! :)
Keep it up and I'll keep comin' ! :P
" Best of Luck in whatever you do ! "
မင်းရဲ့ ပိုစ့်တွေကို အကုန်ကြိုက်တယ်.. ကောင်းတယ်ဆိုတာ အထူးပြောနေစရာ မလိုတော့ဘူးနော် သယ်ရင်း